एनआईपीएल क्रिकेट टुर्नामेन्ट अन्तर्गत चार चरणको खेल सम्पन्न - News Today
एनआईपीएल क्रिकेट टुर्नामेन्ट अन्तर्गत चार चरणको खेल सम्पन्न
Date: २९ कार्तिक २०७४, बुधबार २०:१७
वीरगंज, २९ कार्तिक । नेपाल भारत महिला तथा पुरुष एनआईपीएल क्रिकेट टुर्नामेन्टको बुधबार चार चरणको खेल सम्पन्न भएका छन् ।
वीरगंजको आदर्शनगर रङ्गशालामा सञ्चालित टुर्नामेन्ट अन्र्तगत बीरगंज एमेसर र यु.पी.बी. बिच भएको पहिले खेलमा बीरगंज एमेसर ४ बिकेटले बिजय भएको छ । त्यसैगरी गंजभवानीपुर आ गहवा बीरगंज बिच भएको दोस्रो खेलमा गहवा ५६ रनले बिजयी भएको छ । त्यसैगरी यु.पी .ए. र कर्नाटका बिच भएको तेस्रो खेलमा यु.पी.ए. ९५ रनले बिजयी भएको छ । त्यसैगरी बिहार महिला क्लब र उडिसा महिला क्लब बिच भएको चौथो खेलमा बिहार २५ रनले बिजयी भएको संस्थाका सचिव करण पटेलले जनकारी दिनु भयो ।
आज भएको खेलमा एस.आर.एफ नेपाल र करनाटका बिच भएको खेलमा करनाटका १३ रनले बिजयी भएको छ । त्यसैगरी पि.ए.सि. नेपाल र बिहार बिच भएको खेलमा बिहारले २९ रनले बिजयी भएको छ । त्यसैगरी जि.भि.पि. नेपाल र राजस्थान बिच भएको खेलमा राजस्थानले १३४ रनले बिजयी भएको छ संस्थाका सचिव करन पटेलले जानकारी दिए । संस्थाका अध्यक्ष बिनेश प्रसाद कुर्मीको सभापतित्वमा भएको खेलमा संस्थाका उपाध्यक्ष उमेश कुमार गुप्ता, सचिव करन कुमार पटेल, सहसचिव अमजत अंसारी, कोषाध्यक्ष किरन पटेल, सदस्य कामनी कर्ण, गायत्री थरुनी, पिंकी सर्राफ, दिपा सर्राफ, मन्जु पडित लगायतको विशेष सक्रियता रहेको छ ।
Previous : सप्तरीमा व्यापक आचारसंहिता उल्लंघन
Next : उम्मेदवारहरुको प्रचार सामग्री हटाउँदै सप्तरी प्रशासन